Fanafihana “BAR” sy “RESTAURANT” teny Ivato Nanjavona ny 10 tapitrisa sy entana sarobidy maro
Ao anatin’ny famotorana tanteraka ny mpitandro filaminan’Ivato mahakasika ny halatra nandratrana olona teny an-toerana.
Nitrangana fanafihana tokoa mantsy ny toeram-pisotroana sy toeram-pisakafoanana iray teny Ivato, sady fokontany no kaominina izay ao anatin’ny distrikan’Ambohidratrimo, tamin’ny alakamisy teo. Tamin’ny 10 ora alina sy fahefany no nitranga ny fanafihana mitam-piadiana. Mody mpanjifa teo amin’ilay “Bar” sady “restaurant” ireo jiolahy telolahy izay nirongo basy mahery vaika sy zava-maranitra, vy boribory lava na “fer rond”. Very tamin’izany ny vola malagasy 10 tapitrisa ariary sy vola vahiny 500 dolara amerikanina sy 200
euro. Ankoatra ireo fahaverezana vola ireo dia voaroba ihany koa ny zava-tsarobidy tahaka ny solosaina 3 izay entin-tanana amin’ilay hika farany, ny finday avo lenta “android” telo ihany koa ary
kitapo roa izay nisy entana sy antotantaratasy sarobidy tahaka ny “visa” sy “passeport”. Noratrain’ireo jiolahy ny tompon-tsena izay teratany Sinoa mananika ny 62 taona sy ny mpanampy
mpandroso sakafo sy zava-pisotro roa izay samy teratany Malagasy ka 40 taona ny iray. Ny zandary any an-toerana no mandray an-tanana ny tohin’ny fanadihadiana. Manamaloka ny endrik’i
Madagasikara amin’ireo mpampiasa vola avy any ivelany ny toe-javatra mamohehitra toy izao, indrindra eny Ivato izay varavarana amin’ny fiaramanidina mampifandray amin’ny havana avy
any dilambato sy ny teratany vahiny.